SomaliTalk.com » Go’doominta lala rabo reer S/galbeed sidee looga gaashaantaa? | Xasan
Go’doominta lala rabo reer S/galbeed sidee looga gaashaantaa?
Gumeysiga Itoobiya oo dhib iyo tacadiyo badan oo isugu jira dil, jirdil, dhac, barakicin iyo xabsiba ku hayey dadweynaha reer soomaali galbeed wuxuu baryahaan danbe billaabay tab cusub oo ah inuu heshiis hoosaadyo la galay maamullada ka jira Soomaaliya qaarkood; si ay ugu soo gacangaliyaan dadka ka soo cararay ama u adkeysan waayay dhibaatadii loogu geysanayay deegaankooda.
Falalka qabqabashada iyo falceliskoodu yay dan uyihiin?
Gabagabadii shaki kuma jiro in waxa dhacay ay yihiin xadgudub foolxun oo badheedh ah oo ka soo horjeeda diinta, sharafta, Soomaalinimada, dhalashada, danta shacabka Soomaaliyeed iyo xataa aadaminimada, kaas oo lagu la kacay shacabka reer S/galbeed ee awalba dhibbanaa. Waxaa iyana hubaal ah in cidda tacadigan gaysatay ay tahay ciddii wax ka qaban lahayd ama ka shaqayn lahayd xoraynta iyo badbaadinta walaalohood cadaawaha u gacangalay, arrintuna waxay u muuqataa “geel ninkii dhicin lahaa dhacayo” ama meeshii cirka laga filayey oo ciiryaamo ka timid. Waxaa kale oo iska cad in aanay dadka falalkan gaystay ku matalayn shacabka Soomaaliyeed ama beelaha ay ka dhasheen, isla markaasna aanay waafaqsanayn nidaamka u degan maamuladooda ee ay tahay wax dad gaar ahi ku taloxumaysteen. Si kastaba ha ahaatee arrintani waa arrin weyn oo yeelan karta wax badan oo ka dameeya, waxaana loo baahanyahay in la qaado tillaabooyin waaweyn oo leh baaxadda xadgudubku leeyahay, ayna ka wada qaybqaataan, isuna kashadaan hoggaanka diimeed, dhaqan iyo siyaasadeed ee deegaanada iyo beelaha arrintu dhextaal, qolo walbana ay ka soo baxdo waxa kaga aadan dhacdadan fooshaxun iyo xal u helideeda. Waxaa kale oo ku habboon dhinacyada arrintani sida gaarka ah u sii khusayso inay dib u jalleecaan raadka xun ee arrinta noocan ahi uga tagtay labada shacab ee walaalaha ah ee S/galbeed iyo S/land markii ay ka hortagi waayeen dadkii labadoodaba sida xun u matalay!.
1 Jawaab " Go’doominta lala rabo reer S/galbeed sidee looga gaashaantaa? | Xasan "
Wednesday, November 4, 2009 at 11:12 pm
salama caleekum bahda somali talk salan kadib waxaan rabaa inaan xuso maqaalka dheer uu qoray mr xasan maxamed ibraahim walaal waa aragti saliim ah wana fikir aad uu wanagsan laakin ninkii ilahay siiyo ayaa garta fikirka wanagsan een lahayn cudurka, waxaan dhihi wad sheegtay wixii haboona laakin muwaafaq ilahay ha siiyo umadan amin